2 Tantara 24 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (2008)
2 Tantara 24:1-27
24 Fito taona i Joasy tamin’izy nanomboka nanjaka,+ ary efapolo taona no nanjakany tany Jerosalema.+ Ny anaran-dreniny dia Zibia, avy any Beri-sheba.+ 2 Ary nanao izay mahitsy teo imason’i Jehovah+ foana i Joasy,+ nandritra ny androm-piainan’i Joiada mpisorona.+ 3 Nakan’i Joiada vady roa izy, ka niteraka zazalahy sy zazavavy.+ 4 Tatỳ aoriana dia nirin’ny fon’i Joasy ny hanavao ny tranon’i Jehovah.+ 5 Koa novoriny ny mpisorona+ sy ny Levita ka nilazany hoe: “Mankanesa any amin’ireo tanànan’i Joda, ka manangòna vola avy amin’ny Israely rehetra, mba hanamboarana ny simba+ amin’ny tranon’Andriamanitrareo isan-taona.+ Ary karakarao haingana izany.” Tsy rototra tamin’ilay izy anefa ny Levita.+ 6 Koa nantsoin’ny mpanjaka i Joiada izay lohany tamin’ireo, ka noteneniny hoe:+ “Nahoana no tsy notakinao tamin’ny Levita ny tatitra momba ny fanangonana ny hetra masina avy amin’ny Joda sy Jerosalema, dia ny hetra efa nasain’i Mosesy+ mpanompon’i Jehovah nomen’ny fiangonan’Israely ho an’ny tranolay misy ny Tenin’ny Vavolombelona?+ 7 Ny tranon’Andriamanitra mantsy efa norobain’ny+ zanakalahin’i+ Atalia ratsy fanahy, ary na ny zava-masina+ rehetra tao an-tranon’i Jehovah aza natolony ho an’ireo Bala.”+ 8 Dia nanome baiko ny mpanjaka, ary nanao vata+ izy ireo ka nametraka izany teo ivelan’ny vavahadin’ny tranon’i Jehovah. 9 Avy eo dia nanao antso avo nanerana an’i Joda sy Jerosalema izy ireo, mba hanaterana ny hetra masina+ ho an’i Jehovah. Io ilay hetra nasain’i Mosesy+ mpanompon’Andriamanitra homen’ny Israely, fony izy ireo tany an-tany efitra. 10 Ary faly+ ny andriana+ rehetra sy ny vahoaka manontolo, ka nitondra vola sy nandrotsaka izany tao amin’ilay vata.+ Ary samy nandrotsaka daholo izy rehetra. 11 Rehefa tonga ny fotoana, dia nentin’ny Levita ilay vata ka nateriny tany amin’ny mpanjaka.+ Ary raha vao hitan’izy ireo fa nisy vola+ be dia be tao amin’ilay vata, dia tonga ny mpitan-tsoratry+ ny mpanjaka sy ny solontenan’ny lehiben’ny mpisorona, ka namoaka ny vola rehetra tao. Ary nobatainy ilay vata, ka naveriny teny amin’ny toerany. Toy izany foana no nataon’izy ireo isan’andro, ka nahangona vola be dia be izy ireo. 12 Ary nomen’ny mpanjaka sy Joiada an’ireo mpanao ny asa+ fanompoana tao an-tranon’i Jehovah ny vola.+ Koa ireo no nanakarama ny mpipai-bato+ sy ny mpanao asa tanana+ mba hanavao ny tranon’i Jehovah,+ ary koa ny mpanao asa vy sy varahina mba hanamboatra ny simba tamin’ny tranon’i Jehovah.+ 13 Dia natombok’ireo mpanao ny asa ilay asa,+ ka nandroso ny fanamboarana nataon’izy ireo, ary tamin’ny farany dia voamboatrany tsara araka ny tokony ho izy ny tranon’Andriamanitra sady nataony mafy tsara. 14 Raha vao vitan’izy ireo izany, dia naterina tany amin’ny mpanjaka sy Joiada ny ambim-bola. Ary nanao an’ireto zavatra ireto koa izy ireo: Fitaovana ho an’ny tranon’i Jehovah sy ho an’ny fanompoana,+ fitaovana fanaovana fanatitra, kaopy,+ ary fitaovana vita tamin’ny volamena+ sy volafotsy. Ary nanao fanatitra dorana+ tao an-tranon’i Jehovah ny olona, nandritra ny androm-piainan’i Joiada. 15 Ary efa antitra sady voky andro+ i Joiada vao maty. Telopolo amby zato taona izy tamin’izay. 16 Koa nalevina tao amin’ny Tanànan’i Davida niaraka tamin’ireo mpanjaka izy,+ satria nanao soa teo amin’ny Israely+ sy tamin’Andriamanitra ary tamin’ny tranon’Andriamanitra. 17 Rehefa maty i Joiada, dia tonga niankohoka teo anatrehan’ny mpanjaka ireo andrianan’ny+ Joda. Tamin’izany fotoana izany, dia nihaino azy ireo ny mpanjaka.+ 18 Koa nafoin’izy ireo ny tranon’i Jehovah Andriamanitry ny razany. Ary nanompo ny tsato-kazo masina+ sy ny sampy+ izy ireo. Dia tezitra tamin’ny Joda sy Jerosalema Andriamanitra noho izany helok’izy ireo izany.+ 19 Ary tsy nitsahatra naniraka mpaminany+ nankany amin’izy ireo i Jehovah mba hampodiana azy ireo aminy. Koa nampitandrina azy ireo foana ny mpaminany, nefa tsy nihaino izy ireo.+ 20 Dia tonga+ tamin’i* Zakaria+ zanak’i Joiada+ mpisorona ny fanahin’Andriamanitra,*+ ka nitsangana teo amin’ny toerana avo kokoa noho izay nisy ny vahoaka izy, ary niteny hoe: “Izao no nolazain’ilay tena Andriamanitra: ‘Nahoana ianareo no mandika ny didin’i Jehovah? Tsy hahomby ianareo amin’izany.+ Nahafoy an’i Jehovah ianareo, ka mba hafoiny koa.’”+ 21 Koa niray tetika hanohitra an’i Zakaria izy ireo,+ ka nitora-bato azy+ teo an-tokotanin’ny tranon’i Jehovah, araka ny baikon’ny mpanjaka. 22 Ary tsy mba tsaroan’i Joasy Mpanjaka fa naneho hatsaram-panahy feno fitiavana taminy i Joiada rain’i Zakaria.+ Koa novonoiny io zanak’i Joiada io. Dia hoy i Zakaria rehefa ho faty: “Hojeren’i Jehovah anie izao ka hovaliany!”+ 23 Ary niakatra mba hiady tamin’i Joasy+ ny tafik’i Syria+ tamin’ny fiandohan’ny taona,+ ka notafihin’izy ireo i Joda sy Jerosalema. Dia naripak’izy ireo daholo ny andrianan’ny+ vahoaka, ary nalefany tany amin’ny mpanjakan’i Damaskosy+ avokoa ny zavatra nobaboiny. 24 Miaramila vitsy fotsiny no nentin’ny tafika syrianina nanafika tany,+ nefa ny natolotr’i Jehovah teo an-tanany dia miaramila be dia be+ satria nahafoy an’i Jehovah Andriamanitry ny razany izy ireo. Ary nampihatra didim-pitsarana+ tamin’i Joasy ny Syrianina. 25 Ary lasa nody ny Syrianina, ka navelany tao anatin’ny aretina mafy i Joasy.+ Dia niray tetika+ hamono azy ny mpanompony, noho ny nandatsahany ny ran’ny+ zanak’i Joiada+ mpisorona. Koa novonoin’izy ireo teo am-pandriana izy ka maty.+ Dia nalevina tao amin’ny Tanànan’i Davida+ izy, saingy tsy tao amin’ny fasan’ny mpanjaka.+ 26 Ireto no niray tetika hamono azy: I Zabada+ zanak’i Simata vehivavy amonita, sy Jozabada zanak’i Simrita vehivavy moabita. 27 Ary ny amin’ny zanany, sy ny fanamelohana maro be nambara taminy,+ ary ny fanamboarana indray+ ny tranon’Andriamanitra, dia efa voasoratra ao amin’ny fitantarana ao amin’ny Boky+ Momba ny Mpanjaka. Ary i Amazia+ zanany no nanjaka nandimby azy.